Wzọ 6 ịkpọlite ​​afọ ochie | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu ndụmọdụ m na-enyekarị ụlọ ọrụ bụ otu esi akpọlite ​​ọdịnaya ochie iji mee ka okporo ụzọ ọhụrụ dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ ruo ogologo oge, ị nwere ọtụtụ ọdịnaya dị ukwuu - yana ọtụtụ n'ime ya ka nwere ike ịdị ndị na-agụ ya mkpa. Enweghị ihe kpatara na ị nweghị ike iweghachi ọdịnaya a iji wuo okporo ụzọ maka saịtị gị na ịre ahịa na ụlọ ọrụ gị.
Wzọ isii iji kpalite afọ ojuju
Site na post gi ọzọ: You na-ezo aka na ochie posts na ọhụrụ gị posts? Gịnị mere? Ọ bụrụ n’edere ụfọdụ ọdịnaya dị mma maka ọkwa dị ugbu a, ị ga-atụfu njikọ ya n’ebe ahụ. Ọzọkwa, ị nwedịrị ike ịchọrọ itinye mgbakwunye mgbakwunye yiri ya (ọkacha mmasị m metụtara WordPress metụtara ngwa mgbakwunye ebe a). Nye ihe ndị metụtara ya nwere ike iweghachi posts site na nyocha nyocha ọchụchọ (ebe ị nwere njikọ site na ibe obibi gị) yana ịbawanye peeji gị kwa nleta na saịtị ahụ.
Site na Nchọgharị Nchọgharị: Zụta ndenye aha otu ụbọchị iji SEOpivot. Gbaa akụkọ ahụ na blọọgụ gị, a ga-enye gị ndepụta nke ederede yana isiokwu dị mkpa na-achọta post maka. Na-ebuli aha post, nkọwa atọ na okwu ole na ole nke post iji tinye isiokwu dị iche iche ma bipụta ya. Ọ bụrụhaala na ị wụnye ngwa mgbakwunye Sitemap, nke a ga-agwa injin nchọta nke mgbanwe a ga-edegharịkwa post gị, o yikarịrị ka ọ ka ọkwa ka mma.
site Twitter: Enwere otutu tweetin na-aga. O nwere ike ịbụ na ị tolitere ihe ndị na-esote gị kemgbe oge ikpeazụ izipụrụ post blog na Twitter iji kesaa netwọkụ gị. Kwupụta ya ọzọ (mana mee ka ndị na-eso ụzọ ya mara na ọ bụ mkpugharị), site na ịsị… “Nke a bụ ọkwa m kachasị ewu ewu n'ọnwa gara aga na [tinye isiokwu]. Ọ bụrụ na ndị folks agụghị ya, ha nwere ike ugbu a!
site StumbleUpon: Ikwesighi ikwalite ọdịnaya nke gị na StumbleUpon… ikwesiri isonye na obodo ma sụọ ngọngọ na saịtị ndị ọzọ (ị gaghị akwa ụta ya found Achọtala m ọtụtụ akụ dị mma ebe ahụ). Agbanyeghị, site n'oge ruo n'oge, na-akwalite ọdịnaya ochie nke na-adịbeghị sụọ ngọngọ n'ihu nwere ike ịkwọ ụfọdụ nnukwu okporo ụzọ.
site Facebook: Ibe akwukwo Facebook na profaịlụ nke onwe gi bu ezigbo ebe iji zipu ọdịnaya ochie nke ka bara uru. Mmiri iyi Facebook bụ naanị 'iyi' na mgbe ị chere nwa oge, ịnwere ike iweghachite ọdịnaya dị ukwuu na iyi ahụ ma mee ka ọ ofaa ntị nke ukwuu.
site Google+: Agụọla obere mkparịta ụka mkparịta ụka na-eme na Google+. N'ihi na ndị pere mpe na-arụsi ọrụ ike na ya na-enye gị ohere ka ị chọta ma kesaa n'ime obodo ahụ!
Y’oburu n’inwe blọọgụ nwere otutu ọdịnaya di nma, iweghachi ọdịnaya kwesiri ibu atụmatụ diri gi. Usghaghachị ọdịnaya ndị dị mkpa dị mkpa n'ime elegharị anya nwere ike ịme ọtụtụ okporo ụzọ ndị ọzọ na azụmahịa gị. Nwee obi ụtọ banyere ọdịnaya ị na-akwalite ma akarịla ndị na - eso ụzọ gị ugbu a, ndị na - eso ụzọ na ndị debanyere aha gị n'ọtụtụ nkwugharị… mana egbula oge ịkwalite ọkwa na-ewu ewu iji kpọlite ​​ya. Ọ ga - eju gị anya etu ọdịnaya ochie bara uru!
Tags: Facebookgoogle +ochie ọdịnayakpalite ọdịnayatụgharịa ọdịnayasearch enginesTwitter
Omume Omume Kachasị Mma: Otu esi achọ maka ntụgharị
Ọkt 27, 2014 na 9:32 PM
Douglas, echetụdịghị m banyere StumbleUpon. Chee na nke a bụ nnukwu akụ ma na-enyocha ọzọ. Enwere m mmasị na simpe menton nke ijikọ azụ na isiokwu ndị gara aga, nzọụkwụ dị mfe a na-elegharakarị anya.